တရုတ် 4J29-Kovar အလွိုင်းချွတ်မှု Kovar bar / kovar sheet / kovar tube ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | Sekonic
4J29-Kovar အလွိုင်းချွတ်မှု Kovar bar / kovar sheet / kovar tube
ဘုံကုန်သွယ်ရေးအမည်များ: Kovar Alloy၊ 4J29, UNS K94610 (FeNi29Co17),29HK Kovar, KV-1,29HК-BI, Werkstoff Nr.1.3981
ဤသတ္တုစပ်သည်ဖန်ထည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောချဲ့ထွင်နိုင်သောအလွိုင်းကိုလည်းပြုလုပ်သည်။အဆိုပါအလွိုင်းတစ်ရှိပါတယ် linear ချဲ့ထွင်ကိန်း ၂၀-၄၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ဆီလီကွန်ဘိုရွန် (hard glass) နှင့်ဆင်တူသည် ပိုမိုမြင့်မား Curie အချက်နှင့်ကောင်းသောနိမ့်အပူချိန်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတည်ငြိမ်မှု။ အောက်ဆိုဒ်အရောအနှောသည်သိပ်သည်းပြီးကောင်းစွာဖြစ်နိုင်သည် ရေ က ဖန်ခွက် . ဒါဟာ mercu နဲ့အပြန်အလှန်မထားဘူးry နှင့်မာကျူရီပါဝင်သောစွန့်ပစ်မီတာများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်လေဟာနယ်ပစ္စည်းများအတွက်အဓိကတံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Kovar Alloy ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု
C Cr နီ မိုး Si Mn P S Fe Co. , Cu
.030.03 .20.2 28.5-29.5 .20.2 .30.3 .50.5 .020.02 .020.02 ချိန်ခွင်လျှာ 16.8-17.8 .20.2
သိပ်သည်းဆ (g / cm3) အပူစီးကူးမှု (W / m · K) လျှပ်စစ်ခုခံမှု (μΩ· cm)
၈.၃ 17 45
ပျမ်းမျှ linear ချဲ့ထွင်ကိန်း a, 10-6 / oC
kovar ၅.၉ ၅.၃ ၅.၁ ၅.၃ ၆.၂ ၇.၈ ၉.၂ ၁၀.၂
Kovar လိုင်းအတွက် linear တိုးချဲ့ကိန်း
အလွိုင်းအဆင့် နမူနာအပူကုသမှုစနစ် ပျမ်းမျှ linear တိုးချဲ့ကိန်းα, 10-6 / oC
ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထုထဲတွင် 900 ± 20 oC, insulator တွင် 1h အပူ, ပြီးတော့ 1100 ± 20 oC အပူ, insulator တွင်လည်း 15 မိနစ်,5oC / min အပူအောက်မှ 200 oC မှထုတ်လွှတ် ----- ၄.၆-၅.၂ 5.1-5.5
အလွိုင်းအဆင့် ပျမ်းမျှ linear ချဲ့ထွင်ကိန်း a, 10-6 / oC
၅.၉ ၅.၃ ၅.၁ ၅.၃ ၆.၂ ၇.၈ ၉.၂ ၁၀.၂
Sekonic Metals တွင် Kovar Alloy ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များ
Kovar ဘား & လှံတံ
Kovar စာရွက် & ပန်းကန်
Kovar ချောမွေ့ပြွန် & Caplliary Tube
Kovar ချွတ် & ကွိုင်
အဘယ်ကြောင့် Inconel Kovar?
1.Kovar သည်ဖန်သားမျက်နှာပြင်များနှင့်ကပ်လျက်ရှိသည့်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သောအီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ဤရွေ့ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုစသည်တို့ကိုပါဝါပြွန်နှင့် X-Ray ပြွန်အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော devices များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
Semiconductor စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် kovar ကိုပေါင်းစပ်ထားသောနှင့် discrete circuit devices နှစ်ခုလုံးအတွက် hermetically sealed packages များတွင်အသုံးပြုသည်။
3.Kovar အမျိုးမျိုးသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပုံစံများအမျိုးမျိုးအတွက်ပေးအပ်သည်။ ၎င်းသည်မာကျောသောဖန်များနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အပူတိုးချဲ့နိုင်စွမ်းများရှိသည် သတ္တုနှင့်ဖန်သို့မဟုတ်ကြွေထည်များအကြားလိုက်ဖက်သည့်တိုးချဲ့အဆစ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
4.Kovar အလွိုင်းသည်လေထဲမှအရည်ပျော်သောသံ - နီကယ် - ကိုဘော့၊ အနိမ့်ချဲ့ထွင်သောအလွိုင်းဖြစ်ပြီးဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှုသည်ကျဉ်းမြောင်းသောကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းထိန်းချုပ်ထားပြီးတူညီသောအပူတိုးချဲ့နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုရရှိစေသည်။ နက်ရှိုင်းသောပုံဆွဲခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စက်ယန္တရားများအတွက်လွယ်ကူစေရန်တူညီသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုသေချာစေရန်ဤသတ္တုစပ်ကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။
Kovar Alloy လုပ်ငန်းနယ်ပယ်：
● Kovar သတ္တုစပ်ကို Pyrex မျက်မှန်များနှင့်ကြွေထည်ပစ္စည်းများပိုမိုတင်းကျပ်စွာပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။
●ဒီအလွိုင်းသည်ပါဝါပြွန်များ၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ပြွန်များ၊ intergrated ဆားကစ်များတွင်၎င်းကို Flat Package နှင့် Dual-in-Line အထုပ်များတွင်အသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ သံမဏိ PH15-7MO
နောက်တစ်ခု: တိုးချဲ့ Alloy Invar36-4J36 စာရွက် / ဘား / Strip / Tube
Shielding နှင့် permalloy များအတွက် Soft Magnetic Alloy ...
တိုးချဲ့ Alloy Invar36-4J36 စာရွက် / ဘား / Strip / Tube
အလွိုင်း 46 UNS K94600 ဘား / စာရွက် / ချွတ်
ဂြိုဟ်တုလက်စွပ်, ဂြိုလ်တု 6B, ဂြိုလ်တု 6, အလွိုင်း R26 မူလီ, ဂဟေဝါယာကြိုး, ဟေး 25 ဝါယာကြိုး,